Courtyard Port of Spain dia manolotra efitrano vaovao misy aingam-panahy any Karaiba
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Courtyard Port of Spain dia manolotra efitrano vaovao misy aingam-panahy any Karaiba
MOMBA NY COURTYARD BY MARRIOTT Couryard no marika safidy hotely ho an'ireo vahiny be zotom-po sy liana mahita ny dia ataon'ny orinasa ho mpamily fanatanterahana manokana sy fivoaran'ny asa aman-draharaha. Ny kianja dia manome ny fahafahan'ny vahiny mikatsaka ny filan'ny tenany manokana sy ny matihanina eny an-dalana. Miaraka amin'ny toerana maherin'ny 1,100 any amin'ny firenena sy faritany 50 mahery, i Couryard dia mirehareha handray anjara amin'ny programa mahatoky nahazo loka tamin'ny indostria, Marriott Rewards® izay ahitàna The Ritz-Carlton Rewards®. Ny mpikambana izao dia afaka mampifandray kaonty amin'ny Starwood Preferred Guest® ao amin'ny members.marriott.com ho an'ny fitoviana satan'ny elite eo noho eo sy ny famindrana isa tsy voafetra. Raha mila fampahalalana bebe kokoa na famandrihana dia tsidiho ny couryard.marriott.com, tonga mpankafy amin'ny Facebook na araho ny @CouryardHotels ao amin'ny Twitter sy Instagram.
Courtyard Port of Spain dia manomboka amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny efitrano nohavaozina. Ny fanavaozana dia nahitana efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny 2019 ary nandrava tanteraka ny efitrano fatoriana sy ny fanavaozana ny efitrano fatoriana sy ny fandroana vaovao misy ny fanavaozana teknolojia farany.
Ny endrika vaovao dia manolotra faritra hybrid ho an'ny asa, torimaso ary fialan-tsasatra. Ny jiro tsy mivantana sy ny loko tsy miandany dia manome toerana milamina sy milamina. Ny loko toy ny volomaso, fotsy, manga ary maitso dia eo ihany koa hanehoana ny toerana itodiana any Karaiba.
“Be kokoa ny efitrano. Ny mpandeha raharaham-barotra dia hanana safidy samihafa hiasa sy hiala sasatra tsara. Ny efitrano fandroana dia misy fandroana orana mandehandeha be izao, ireo efitrano koa dia misy singa entanin'ny ala madio. Ny habaka marobe amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny vaovao dia ohatra tonga lafatra amin'ny mari-pamantarana marika Couryard: Fialan'ny Passion, ny fahafaha-manavaka ny habaka dia hanome fampiononana bebe kokoa ho an'ireo vahiny ho olom-bitany mamorona sy mahomby indrindra, "hoy ny fanamarihana nataon'i Nicol Khelawan, Tale Jeneraly Seranana Seranan'i Espana.
Trinidad sy Tobago dia iray amin'ireo firenena manankarena indrindra ao Karaiba, izay itomboan'ny sehatry ny fizahantany ary anisany ampahany lehibe amin'ny toekarena nosy. Miaraka amoron-dranomasina fotsy tsara tarehy sy ny tontolon'ny natiora, dia fantatry ny firenena amin'ny fankalazana ny Fetiben'ny karnavaly isan-taona ary koa ny toerana nahaterahan'ny gadona Karaiba toy ny calypso.
Courtyard Port of Spain izay any amin'ny renivohitry ny firenena dia 45 minitra avy amin'ny Piarco International Airport ary 10 minitra avy ao amin'ny City Center.
Ny Boeing 787-10 voalohany dia manomboka serivisy transcontinental mahazatra
Ny mpizahatany sinoa dia mametraka an'i Russia amin'ny toerana telo lehibe indrindra fitsangantsanganana eropeana